सिन्धुलीगढी विजयोत्सव मनाइँदै – bampijhyala.com
Home > समाचार > सिन्धुलीगढी विजयोत्सव मनाइँदै
२४ कार्तिक २०७७, सोमबार १३:२१ bampijhyala
बाँपीझ्याला, सिन्धुली । यहाँको कमलामाई नगरपालिकाले आज सिन्धुलीगढीमा विजयोत्सव मनाउने भएको छ । विसं १८२४ कात्तिक २४ गते नेपाली फौजले अङ्ग्रेज फौजलाई हराएको सम्झनामा नगरपालिकाले विजयोत्सव मनाउने गरेको हो ।
बाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेप नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुन बैंकको कति ? २४ कार्तिक २०७७, सोमबार १३:२१
प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दै २४ कार्तिक २०७७, सोमबार १३:२१
अर्जेन्टिना र चिलीले बराबरी २४ कार्तिक २०७७, सोमबार १३:२१
विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र आजदेखि शुरु २४ कार्तिक २०७७, सोमबार १३:२१
काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञा कति खुकुलो ? कति कराई ? २४ कार्तिक २०७७, सोमबार १३:२१